Ịkụcha ego nke njem njem ndị ọzọ - Car Rental Choice Blog
Mgbe ego na-ejedebe, ezumike kwa afọ nwere ike ịdaba na ala nke 'ihe dị oké ọnụ ahịa' ma chụọ àjà, mana ha ekwesịghị ịdị. Site n'ịzụ ahịa na ịmara ego gị, echefu echefu, njem njem na njem ndị njem na mba ọzọ ka dị ọnụ.
Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ kachasị elu iji chekwaa ụgwọ gị, na mgbago ezumike gị.
Ụgbọ ala ụgbọ ala ụgbọ ala
Inwe njem nke onwe gị nwere ike ịba ụba karịa ịtụkwasị obi na njem ọha na eze, karịsịa ma ọ bụrụ na otu obere ìgwè gị na-eme njem. Ị nwere ike ịde akwụkwọ ọnụ ala ụgbọ ala na-arụ ọrụ site na Car Rental Choice, na-anakọta ma ọ bụ kwatuo ụgbọala gị na ihe ọ bụla ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ n'obodo ọ bụla n'ụwa. N'elu nke ahụ, enwere oge azụmahịa na ego dị, ya mere nyochaa weebụsaịtị mgbe niile ma ọ bụ debanye aha anyị na ala anyị maka mmelite na onyinye anyị.
Ụlọ mbikọ na Backpackers
Ọ bụrụ na naanị ahụmahụ gị nke ịnọ na ụlọ mbikọ bụ dịka onye na-eto eto na njem ụlọ akwụkwọ ebe ị ga-eketa ebe obibi oyi, nke na-adịghị mma, nke nwere ihe ọkụkụ na-enyo enyo na ọtụtụ ebe a na-atụbe nnukwu spiders, ị ga-abanye a ọgwụgwọ. Ụlọ ọrụ na-azụ azụ na-agbapụ ma nke a pụtara na ụlọ obibi dị mma dị na nkume ala ala, n'ụwa nile. Ụfọdụ nwere ụlọ ihi ụra nke onwe, hot tubs, izute na-ekele BBQ, nkịta ị nwere ike na-eje ije, na free ehihie na abalị ... ndepụta bụ n'ezie n'ụzọ na-adịghị agwụ agwụ. Ebe nyocha nwere ike ịnọ na netwọk - ọ bụghị naanị ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ, mana ndị nlekọta ndị ahịa na ndị blọọgụ njem; ha ga-enye gị ihe n'eziokwu banyere ihe ị ga-atụ anya na ebe ị ga-esi nweta ezigbo ego.
Enwere ebe ole na ole n'ime ụwa nke na-enweghị ebe obibi azụ, ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na ị ga-anọpụ na mmepe anya maka ụbọchị ole na ole ma na-ebute nnukwu n'èzí, mgbe ahụ, ịma ụlọikwuu bụ ezigbo ego. Ozugbo ị nwetara ụgbọ ala akwụ ụgwọ, ị nweere onwe gị ibu ọtụtụ ngwá ọrụ gị ma gbanwee ebe ị nọ.
Ee, iri nri mgbe njem na ezumike dị egwu, ma maka ego-amaghị; nri bụ nri. Ọ bụrụhaala na obi gị na afọ ojuju gị, njem gị na-aga kpọmkwem dị ka ọ kwesịrị. Kama iri nri kwa abalị, mee ya otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ ma ugbu a, na-azụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa na ahịa. Ọ bụghị naanị na nchekwa gị ga-abawanye ibu, ma ị ga-enwe ike ịchụpụ gaa ebe mara mma ma rie nri ehihie n'akụkụ ugwu, n'ụsọ osimiri, n'ọgba site na kandụl - nhọrọ ndị a adịghị agwụ agwụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ọkụ, nri esi nri ị na-esote, mgbe ahụ, ụlọ oriri ndị dị na backelcker hostels na-edozi nke ọma na ihe oriri niile ị nwere ike ịchọrọ, ma ihe ọzọ, ọtụtụ ndị nwere ọtụtụ condiments n'efu iji nyere gị jazz aka ihe oriri.
Ime atụmatụ n'ihu nwere ike bụrụ ezigbo onye na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị mara otu mma ịchọrọ ịga na obodo ị na-aga, dị ka akụrụngwa ma ọ bụ ihe ngosi nka, ị ga-achọta '2 maka 1 na-enye' edepụtara na ebe nrụọrụ weebụ ha ndị na-adịghị. n'ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ. Otu ihe a na-emetụtakwa maka ebe mposi; ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-enye ego maka ịkwụ ụgwọ tupu oge eruo.
Rịọ maka ego!
O nwere ike iyi ihe dị egwu, ma ọ bụrụ na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ maara na ị na-azọpụta maka ezumike, na-arịọ ha ka ha nye ego maka ego ị ga-achọ ga-azọpụta ha ihe mgbakwasị nke ịzụ ahịa maka onyinye n'ezie na ego dị oke ụba dị mfe kechie. Ị na-eme ha ihu ọma. Ma, ihe ọzọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo mma ịzọpụta, n'agbanyeghị ụdị ọnwụnwa nke ị ga-enwe ike ịdaba na ego ezumike gị. Naanị cheta izigara ha akwụkwọ ozi site n'ebe ọ bụla ị na-aga dịka ekele gị.
Comments Off na Ịkụcha Ntugharị Njem
Chebara Mmasị Gị echiche - Otu esi emebe na South Africahttps://i2.wp.com/www.carrentalchoice.com/wp-content/uploads/2018/01/capetown-southafri.jpg?resize=600%2C536&ssl=1
Iwu Ịkwọ ụgbọala na United States of Americahttps://i0.wp.com/www.carrentalchoice.com/wp-content/uploads/2019/05/Driving-Rules-United-States-of-America.jpg?resize=275%2C183&ssl=1